China Thermal paper roll machine sy mpanamboatra | Fangda
* Ny taratasy Thermal Fangda dia manana kalitao premium amin'ny coating
* Mikorisa moramora amin'ny alàlan'ny calculator na milina POS ny faritra malama, tsy mila miatrika ny rips eo afovoan'ny kajy lehibe.
* Lokon'ny loko ambonin'akanjo
* Tsy ilaina ny manonta pirinty, tsy mila kasety karbôna na cartridge ink mandritra ny fampiasana
* Ny mainty dia ho lasa mainty rehefa mafana, fa ny coatings mivadika manga na mena kosa indraindray. Raha loharanom-pahavaratra misokatra, toy ny lelafo, dia afaka manala ilay taratasy, ny fantsom-batana iray izay mifintina haingana amin'ny taratasy dia hiteraka hafanana ampy amin'ny fikorontanana ihany koa hamoahana marika.
* Ny horonan-taratasy dia mifanaraka amin'ny mpanonta printy andiany Epson TM-T88, mpanonta fantsom-panafody Star TSP-100, mpanonta fantsona Bixolon SRP-350, mpanonta printy mafana Citizen CT-S310, mpanonta pirinty counter POS Clover Station, ary maro hafa.
Fampiharana horonana taratasy mafana:
* Rafitra fikarakarana hotely
* Rafitra terminal POS
* Rafitra fifandraisan-davitra
* Rafitra fitsaboana
* Rafitra banky
* Toeram-pitrandrahana solika
* Toeram-panomezana loteria
* Drafitra firakotra patanty, fampandrosoana ho an'ny vokatra sy tontolo iainana samihafa
* Volavola manokana azo alalana: fototra samihafa, haben'ny voapaika, fonosana sns.
* Fenitry ny fihaonana amin'ny REACH sy ISO
Previous: Mpanoratra poly
Manaraka: Famantarana mivantana mivantana